‘आमा’ पछि दीपेन्द्रको ‘चिसो मान्छे’ र ‘लकडाउन’ | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
‘आमा’ पछि दीपेन्द्रको ‘चिसो मान्छे’ र ‘लकडाउन’
कमर्शियल र आर्ट दुवै प्रकारका फिल्ममा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका दीपेन्द्र के. खनाल अहिले दुई फिल्मको तयारीमा छन् । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको व्यवसायिक र समीक्षात्मक दुवै रुपमा सफल फिल्म ‘आमा’ पछि नयाँ फिल्मका लागि लकडाउनको समयमा घरमै बसेर स्क्रिप्टमा लेखेका उनले बिहीवार चलचित्र विकास बोर्डमा दुई फिल्मका लागि निर्माण इजाजत लिएका छन् ।
दुई फिल्मको नाम ‘चिसो मान्छे’ र ‘लकडाउन’ राखिएको छ । निर्देशक खनालका अनुसार, दुवै फिल्म सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित भएर निर्माण हुनेछ । फिल्मलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्नेछिन् । फिल्म ‘लभ लभ लभ’ देखि उनले निर्देशक खनालसँग व्यवसायिक सहकार्य गर्दै आइरहेकी छन् । ‘आमा’ को सफलतापछि उनलाई फिल्म निर्माणमा अझ रस पसेको छ ।
दुई फिल्ममध्ये पहिला ‘चिसो मान्छे’ निर्माण हुनेछ । लकडाउनमा निर्देशक खनालले यही फिल्मको स्क्रिप्टमा काम गरेका हुन् । उनका अनुसार, फिल्मको स्क्रिप्ट लगभग फाइनल भइसकेको छ । यो फिल्म निर्माण भएपछि उनी ‘लकडाउन’ को स्क्रिप्टमा बस्नेछन् । दुवै फिल्मका लागि कलाकार फाइनल नभएको उनको भनाई छ । बजारमा भने अभिनेत्रीमा सुरक्षा पन्त हुने चर्चा छ ।
दुई फिल्मको बारेमा निर्देशक खनाल भन्छन्, ‘लकडाउनमा आस मानिसले भोगेको समस्या लगभग एउटै हो । ‘लकडाउन’ मा यही विषय समेटिनेछ । ‘चिसो मान्छे’ मा भने अहिले मानिसहरु चिसो (स्वार्थी) भइरहेको विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौं । स्क्रिप्टमा निकै मेहेनत गरेको छु । राम्रो चीज निस्कनेमा विश्वस्त छु ।’ स्थिति सामान्य भएपछि फिल्मको छायांकन सुरु हुने उनको भनाई छ
सरकारी कार्यालयमै बिल पाउन मुस्किल, नेपाल टेलिकमको प्रिन्टरले बिल प्रिन्ट गर्दैन
मुख्य समाचार जेठ ३, २०७८
राजनीति जेठ ४, २०७८
पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने
राजनीति भदौ १८, २०२१